Sharad ku samee kaararka dharka leh si loo abuuro dhar gur ah | Bezzia
Ku sharrax kaararka loo yaqaan 'cardigans' si loo abuuro dharka guridda
Maria vazquez | 05/04/2021 18:00 | Maxaan xirtaa, Isbeddellada
Miyaad haysaa alaab guriga taal oo aadan xidhnayn tobanaan sano? Waxaa la gaadhay waqtigii lagu kala bixi lahaa kuwan si fursad loo siiyo kuwaas gacmo gashan cardigans in dhammaanteen soo wada mareen ama ugu yaraan dhammaanteen nahay kuwa ku jira da'da loo baahan yahay.
Haddii aad wax leedahay, nasiib baad ku jirtaa! Waad abuuri kartaa qaabab guridda ah isbeddel oo nolol labaad u sii dharkaas. Sow maahan inaad wax keydiso? Ha welwelin, wax dhibaato ah kuma lahaan doontid helitaanka mid aad jeceshahay ururinta moodooyinka hadda jira maxaa yeelay, sidaan ku dhawaaqnay dhowr bilood ka hor, waxay ka mid yihiin isbeddellada xilliga.
Iyada oo la adeegsanayo shaqo furan, ubaxyo daabac leh, daabacado la jeexay ama waxyaabo kala duwan Kaamirooyinka loo yaqaan 'intinage-intinciated' cardigans waa isbeddel xilli ciyaareedkan. Iyo isbeddel ahaan, waxaad ka heli kartaa ururinta shirkadaha moodooyinka sida Zara, Mango ama Asos.
Midabada dhexdhexaadka ah ama midabada jilicsan ee jilicsan Waxay door weyn ku lahaan doonaan dharka xilligan gu’ga-xagaaga ee sanadka 2021. Muhiimadna ma yeelan doonto in la adkeeyo si looga dhex daro kuwan. Xaqiiqdii, ku darista jooniska ayaa ah xulashada ugu caansan ee ku dhex jirta bartayaasha.
Fikradaha laysku daro
Labo jiinis iyo kaarig, uma baahnid waxbadan guga. Ku dhammaystirka muuqaalka Mary Janes ama kabaha T-Bar-ee ciribta cagaha hoose iyo dambiisha gacanta, sida Louisa Durrell ay yeeli lahayd, waxaad ku guuleysan doontaa muuqaal guryo-dhalasho leh oo ku habboon isticmaalka maalin kasta.
Cardigans leh sideed ama shaqo furan oo leh codad dhexdhexaad ah ayaa sidoo kale ku habboon in la xidho dharka ama dusha sare oo leh ubax daabacan. Hadana haddii aad rabto qaab toddobaatan-dhiirrigelin ah, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad u baxdaan goon yar oo dabacsan iyo kaarboonka la moodka ah, ma dhiirranaysaa?
Marka lagu daro kaa caawinta inaad abuurto muuqaalo guridda xilligan, kaararkaan collarless iyo badhanka hore Waxay noqon doonaan kuwo waxtar leh marka xagaagu yimaado. Waxaan hubnaa inaad ka heli doontid wax badan sidaad moodeysid. Miyaad ku biirtaa isbeddellada?
Sawirro - @jiliesfi, @maralafontan, @lolo_bravoo, @xDayaannax, @elliiallii, nacaybtire, @mirenalos, @abdihakin_abdi, @mariellehaon
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Maxaan xirtaa » Ku sharrax kaararka loo yaqaan 'cardigans' si loo abuuro dharka guridda